Banaan baxyo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. – The Voice of Northeastern Kenya
Wararka aan ka helayno degmada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya inuu halkaasi ka saaka ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo kufsi la sheegay inuu ka dhacay tuulo hoostagta degmada Guriceel ee isla gobolka Galgaduud.
Qaar ka mid ah Shacabka Magalada Dhuusamareeb iyo ardayda waxka barata iskuulada Magaaladaasi ku yaala ayaa dhigay banaanbaxaan,waxayna dalbanayaeen in cadaalada la hor-geeyo dadkii ka dambeeyay kufsigaas.
Wararka ayaa sheegaya inkastoo weli aan si rasmi ah loo keeninin cadeymo muujineya kufsi wadareed la sheegay in tuulo hoostagta degmada Guriceel loogu geystay Gabar aad u da’yar ayay hadana dadka banaanbaxa dhigaya waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin dhacdadaasi.
Maamulka degmada Guriceel iyo laamaha maniga Galmudug weli si rasmi ah ugama hadlin kufsigaas sidaweyn Baraha bulshada loogu faafiyay ee la sheegay in Gabadha yar tiro rag ah ay u geysteen.
Warar kale ayaa sheegaya in laamaha amaanku arintaas ku howlan yihiin ayna jiraan shaqsiyaad Falkaas lala xiriirinayo oo gacanta lagu dhigay wallow aysan ciidamada amaanku si rasmi ah u soo bandhigin dadka la qabtay.
← xubin ka tirsan wasaarada arimaah gudaha Soomaaliya oo la dilay.
Saraakiisha guddiga EACC oo howlgalo ka sameeyay xafiiska barasaabka Wajeer →